Tattoos Bay Leaf: Fikradaha aad Jeclaan doontaa | tattooists
Tattoos-ka Bay Leaf: Fikradaha aad jeclaan doontaa
Ma aha Cherry | 18/05/2022 12:12 | Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta
Tattooyada caleenta bay waxay noqon kartaa mid cajiib ah, laakiin sidoo kale waxay noqon karaan kuwo miyir leh, faraxsan, sharaf leh, madow iyo caddaan, midab, canqowga, laabta ... Waxaa jira fursado badan, dhammaantoodna waa kuwo aad u xiiso badan, oo ay adag tahay in la doorto mid.
Taas awgeed Waxaan ku diyaarinay boostadan fikradaha tattoo caleenta laurel ee ugu fiican. Markaa hubaal waxaad heli doontaa kuwa aad jeceshahay, marka lagu daro, waxaanu u kala qaybinay qaybo-hoosaadyo wax ku ool ah si aad si dhakhso ah u hesho, tusaale ahaan, qaab ahaan, haddii ay isticmaalaan midab ama haddii kale, iyo qaybta jidhka ee ay noqon karaan dhigay. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad akhrido maqaalkan kale ee dhammaystirka ah ee taariikhda ubaxa Laurel qaab tattoo ah.
1 bay ka baxo style
1.1 qaab macquul ah
1.2 Gooyo dhaqameed
1.3 tattoo laurel ugu yar
2 Midab mise madow iyo cadaan?
2.1 Madow iyo caddaan
3 Aaway noocyada noocan ah ee loo yaqaan 'tattoos'?
3.1 Laurel ubaxa qoorta
3.2 laurel laabta
3.3 Bay ka baxo gacmaha iyo lugaha
3.4 Laurels meelo yaryar
4 Sawirada tattoos caleen laurel
bay ka baxo style
Habka uu laurel ka baxo ayaa ku siin kara taabashada aad ugu baahan tahay ama ugu yeeri karto tattoo. Tusaale ahaan, isku mid maaha, oo dabcan ma gudbiyaan wax isku mid ah, ee dharbaaxo qaro weyn oo ka mid ah qaabka caadiga ah marka loo eego naqshadeynta wanaagsan ee qaabka ugu yar.
qaab macquul ah
Habka dhabta ah wuxuu u muuqdaa mid aad u fiican oo laurel ah, sida caleemaha, dhirta, iyo ubaxa ayaa runtii u muuqda qaab kasta. Si aad waaqici u noqoto, Caleemuhu maaha inay isku mid noqdaan, laakiin mid kastaa waa inuu leeyahay astaamo u gaar ah, booskiisa...
Habka dhaqameedku wuxuu u muuqdaa mid aad u fiican naqshadaha Dugsi duq ah sida ubaxa laurel. Waxaad raaci kartaa caleemaha xubno kale, sida maskaxda sawirka, inkastoo xaqiiqda dhabta ah ee arrintu ay tahay in ay raacdo xuduudaha caadiga ah ee qaabkan: khadadka qaro weyn iyo midabyo cufan.
tattoo laurel ugu yar
Bedelkii, Habka ugu yar ayaa ah ku dhawaad ​​liddi ku ah dhaqanka, maadaama lagu kala soocay iyada oo leh khadad aad u fiican iyo midabyo aamusan.. Waxyaabo kale oo maskaxda lagu hayo tattoos qaabkan, kuwaas oo u muuqda inay aad u yar yihiin, waa inaysan ku lumin meel aad u weyn oo jidhkaaga ah, sidaas darteed waxaa muhiim ah in la dhigo meelaha dabiiciga ah sida anqawga. , curcurka, dhabarka dhegta, luqunta...
Midab mise madow iyo cadaan?
Labada ikhtiyaarba si isku mid ah ayey u fiican yihiin., inkastoo, sida had iyo jeer, wax walba waxay ku xirnaan doonaan waxa aad rabto inaad u gudbiso tattoo.
Tattooyada caleenta cad ee madow iyo caddaanku waxay leeyihiin qaab aad u hooseeya waxayna ku habboon yihiin qaababka sida dhabta ah ama fudud ama ugu yar, maadaama ay sidoo kale noqon karaan kuwo aad u qurux badan. Khiyaamada ma aha oo kaliya in la ogaado sida loo qabsado caleemaha, laakiin sidoo kale ogaanshaha sida loo ciyaaro hooska, sidaas darteed farshaxan tattoo oo ku takhasusay sawirka dabiiciga ah ayaa ah midka ugu habboon.
Marka aan ka hadalno midabka ku jira tattoos leaf bay Uma jeedno midab aad u dhalaalaya, ama mid aad u yaab badancagaarka caajiska ah ayaa lagu sifeeyaa dhirtan. Taabashada midabku waxay siin kartaa diirimaad iyo daacadnimo naqshadeynta, marka lagu daro, waa mid aad u qabow oo ka duwan midabada kale sida casaanka ama guduudka ah ee berry qaarkood, tusaale ahaan.
Aaway noocyada noocan ah ee loo yaqaan 'tattoos'?
Tattooyada caleenta bay waxay u muuqdaan kuwo aad u wanaagsan meelo badan, maadaama qaabku yahay mid aad u badan (tusaale ahaan, waxay noqon kartaa qaabka taajka, laan ...) waxaana lagu hagaajin karaa qaybo badan oo jirka ah. Kuwa ugu caansan uguna xiisaha badan waxaan ka heleynaa:
Laurel ubaxa qoorta
qoorta waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee laga helo tattoo caleen bay, gaar ahaan qaabka taajka, maadaama qaabkeeda wareegsan ay u egtahay mid cajiib ah. Waxaad samayn kartaa naqshad yar oo ku taal qaybta qoorta ama waxaad dooran kartaa mid weyn iyo qaybta dambe.
Meel kale oo ka mid ah meelaha xiddigaha ah ee lagu dhejiyo tattoo caleen laurel ah ayaa ku yaal laabta, tan iyo meeshan naqshadaha leh labadaba caleemaha laurel iyo si fudud laan ama caleemo ayaa u muuqda mid weyn, kaliya waa inaad ogaataa sida loo rakibo. Marka laga hadlayo taajajka, waxay u muuqdaan in la saaro wadnaha, halka laamuhu inta badan ka soo baxaan garbaha gadaashooda ama ka hooseeya clavicle.
Bay ka baxo gacmaha iyo lugaha
Wax la mid ah waxa ku dhaca laabta ayaa ku dhaca cidhifyada jidhka: waxaan dooran karnaa ubaxa laurel iyo laamo labadaba.
Dhanka taajka. Waxay ku yaalaan meelo ay ka mid yihiin cududda hore, biceps ama dhabarka cududda iyo, dhanka lugaha, mataanaha ama bowdada. Taa baddalkeeda, laamaha iyo caleemaha waxay u muuqdaan inay u taagan yihiin sida haddii ay ku duuban yihiin dhererka cududda ama lugta, taas oo ku dareysa ciyaar badan maadaama tattoo uu u muuqan karo inuu dhaqaaqo.
Laurels meelo yaryar
Si loo dhammeeyo, haddii aan rabno tattoo aadka u yar, waxaa habboon in la dhigo meel ay ku habboon tahay si dabiici ah, sida aan ku sheegnay kiiska tattoo-yada ugu yar, sida canqowga, curcurka, qaybta dhegta gadaasheeda. faraha... Si kastaba ha ahaatee, Waxa kale oo aad caadi u ah in tattoo-yadani ay qayb ka noqdaan asalka kaas oo mideeya hal gabal iyo mid kale.. Waxa ugu fiican ee kiisaskan waa si fudud in la weydiiyo farshaxanka tattoo talo.
Waxaan rajeyneynaa inaad ku riyaaqday maqaalkan fikrado tattoo caleen badan oo aad heshay naqshado kugu dhiirigelinaya. Noo sheeg, ma leedahay tattoos kuwan oo kale ah? Maxay laurel kuu astaan ​​u tahay? Ma haysaa fikrad aad rabto inaad nala wadaagto?
Sawirada tattoos caleen laurel
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta » Tattoos-ka Bay Leaf: Fikradaha aad jeclaan doontaa
Tattoos oo macne leh: fikradaha tattoo ee kicin doona dareenka
Tattooyada ugu yar ee qoysaska raba inay muujiyaan jacaylkooda